Mayelana NATHI - Inkampani yeXuzhou Easypack Glassware Limited
I-Xuzhou Easypack Glassware Limited Company iyimboni kanye nokuhweba inkampani ehlanganisiwe kwimikhiqizo ye-glassware. Njengomkhiqizi owasungulwa ngonyaka ka-2012 e-Xuzhou edolobheni, esifundazweni saseJiangsu, sinolwazi olunzulu ekukhiqizeni iziqukathi zengilazi. Ifektri yethu inezinto zokukhiqiza ezithuthukile, onjiniyela abaphezulu abangaphezu kwama-30 nabasebenzi abangaba ngu-300. Sakha uchungechunge oluningi lweziqukathi zengilazi, njengebhodlela le-Boston eliyindilinga, ingilazi yezimonyo, ibhodlela lesiphuzo, ingilazi ekhishini, ibhodlela lengilazi yemithi, imbiza yengilazi yamatshe, imbiza yokugcina ingilazi yokudla nezinye izinsimbi ezihlobene.
Ishadi lokugeleza lokukhiqiza
Sinemigqa emihlanu ezenzakalelayo kanye nolayini abazenzekelayo ukukhiqiza i-glassware ngezimo ezihlukile, izinhlobo ezingaphezu kwezingu-4,000 zezikhunta zamabhodlela ezokukhetha kwakho. Sinikeza insizakalo ye-OEM ne-ODM ngokuya ngezidingo zamakhasimende.
Okwamanje, sinikeza amaklayenti insizakalo yokucubungula okujulile kwemikhiqizo yawo, njengokuphrinta usilika, ukudweba umbala, isithwathwa, ukushisa okushisayo, ukuqaqamba kanye nokufakwa embossing. Ukuze sibe yinkampani eyaziwayo emkhakheni wezobuchwepheshe be-glassware, sinikezela ngemikhiqizo esezingeni eliphakeme ngesevisi eyodwa yokumisa amakhasimende avela kuwo wonke umhlaba. Cishe i-90% yemikhiqizo yethu ithunyelwa e-United States, Canada, United Kingdom, Germany, Russian, South Korea, Malaysia, Thailand, India, Australia nakwamanye amazwe. Ngobuchwepheshe obusezingeni eliphakeme nedumela elithembekile, sikholelwa ngokuqinile ukuthi i-Easypack izosungula ubungani besikhathi eside kanye nokubambisana nabo bonke abangane nabalingani bebhizinisi ekuthuthukiseni bobabili. Ukukhetha i-Easypack kuzoba yindlela yakho elula yokuphumelela!
Njengoba i-COMI AROMA iqhubeka nokukhula, silwela ukufeza zonke izidingo zamakhasimende.
Uhambo Oluhle Lokupakisha, Umsebenzi Ojabulisayo Nge-COMI AROMA!
Sicela uxhumane nathi nganoma yimiphi imibuzo.
Amabhodlela e-Glass Lotion Nge Pump, Amabhodlela e-Glass Pump Amafutha Abalulekile, Sula Amabhodlela e-Glass Pump, Glass Bottle Nge Pump Idivaysi ekhipha, Glass Bottle Nge Spray Pump, Ingilazi Pump Amabhodlela Shampoo,